Efere Granulation Powder ...
WFA maka Refractories
Low-Sodium Calcined Alumina (HA) Usoro Ntụ ntụ
YUFA Group etinyela otutu nyocha oru na ulo oru sodium alumina di ala.
Anyị azụlitewo teknụzụ ala-sodium dị elu nke ụwa na nzaghachi maka mkpa nke ahịa sodium alumina dị ala, nke gosipụtara nhazi nke ọma.
1. Na2O ọdịnaya nwere ike ịbụ ihe na-erughị 0.01%
2. Adabara ngwa ngwa dị iche iche
Obere Sodium Calcined Alumina (CA) Usoro maka Ceramics
YUFA Group nwere ike na-emepụta dị iche iche ceramik alumina usoro nke adabara na-ekpo ọkụ na-anwụ mgbatị ịpị, isostatic ịpị, ma ọ bụ akọrọ ịpị na ndị ọzọ na-akpụ usoro.
1. Sodium dị ala, nke nwere ike n'okpuru 0.1%.
2. High Ọcha Alumina
3. Crystal size nwere ike ahaziri
Usoro Calcined Alumina (RA) maka Akụrụngwa Refractory
YUFA Group mepụtara aluminarị calcined dị elu na-arụ ọrụ nke ọma dabere na ya karịa afọ 30 nke ahụmịhe mmepụta.
Calcined alumina refractory akụrụngwa mepụtara site n'iji teknụzụ emepụtara naanị yana igwe ọkụ na-agbanwe agbanwe na ọwara ọkụ na-ere nke ọma karịa ahịa 40 nke esenidụt.
1. Site na njupụta dị ukwuu, belata mmiri oriri nke refractures na-enweghị atụ
2. The mbụ crystal bụ obere na nha, nwere elu sintering ọrụ na olu kwụsie ike
3. Belata ma ọ bụ dochie ọnụọgụ nke ọgwụ ndị ọzọ dị oke mma ma mekwaa akụrụngwa igwe dị elu nke refractories
Calcined alumina (PA) usoro maka polishing
The Polishing calcined alumina na-emepụta dị iche iche nha dabere na ndị ahịa chọrọ. Usoro
1. Ọma polishing usoro: Ihe mbụ kristal bụ ihe na-erughị 1 μm 2. Ọkara polishing usoro 3. Pụrụ iche n'ihi na ike ike polishing-acha odo odo wax
Usoro Calcined Alumina (FA) maka Omume Okpomọkụ
Alumina nwere uru nke ikpo ọkụ na mkpuchi, ma nwee ike iji ya dị ka ihe na-eku ume ọkụ maka nkwadebe nke mkpuchi na-eme ka mmiri na-ekpuchi ọkụ, ihe mkpuchi na ihe ndị ọzọ polymer.
Thermally conductive alumina bụ ọcha ntụ ntụ kristal emepụtara n'okpuru ọnọdụ okpomọkụ dị elu. Enwere ọtụtụ ntụ ntụ. Alumina ejiri maka thermal conductivity gụnyere thermal conductivity gụnyere thermal conductive alumina, spasical alumina, quasi-spherical alumina, na mejupụtara alumina.
1. Ezi nkesa na-ekesa, nwere ike iju elu, obere viscosity na ngwakọta mmiri dị mma
2. Igwe ọkụ dị elu, ma e jiri ya tụnyere sịlịkọn crystalline, nrụpụta thermal nke ngwakọta dị elu
3. Ala abrasion ọnụego: ọdịdị bụ * Tụkwasị na, na abrasion nke igwekota na akpụ akpụ bụ obere
4. Ọdịnaya nke sodium na chlorine ion-dị ka adịghị mma dị obere, ọ nwere ezigbo nguzogide mmiri ọkụ
Usoro nke obere-Sodium Calcined Alumina (SA) maka iko pụrụ iche
YUFA Group α-Alumina na-eji usoro calcined pụrụ iche ma nwee njirimara nke ịdị ọcha dị elu, ọdịnaya Fe2O3 dị ala. Ọ bụ isi akụrụngwa maka LCD iko mkpụrụ na elu aluminum cover iko.
1. High-adị ọcha & àjà ihe ọ ultraụ -ụ-ala adịghị ọcha.
2. High alpha adọ akakabarede ọnụego.
Ceramic Granulation Powder (GA) Usoro maka Alumina Ceramics
Utù YUFA na-ahọrọ alumina dị ọcha na oke nha nke kwesịrị ekwesị, nke na-eji nrụgide ma ọ bụ usoro ịgba centrifugal iji mepụta 92, 95, 99, 99.5 na ụdị nkọwa ndị ọzọ nke paịlị granulating. O kwesịrị ekwesị maka akọrọ akọrọ, ngwangwa zọ, isostatic ịpị na ndị ọzọ na Filiks.
1. Ala seramiiki akpụ okpomọkụ
2. Ezi ntụ ntụ na-anọgidesi ike
3. High njupụta, dịghị pores na seramiiki akpụ
YUFA Group puru iche na mmeputa nke oku plọg seramiiki insulators, poselin akpa, mmanụ ọma igniters na ndị ọzọ na ngwaahịa.Using isostatic ịpị, elu okpomọkụ sintering n'ime seramiiki. Ọ nwere ike ịmepụta plọg dị iche iche, ọkpọ seramiiki na ngwaahịa ndị ọzọ na-erughị 150 mm.
1. Nnukwu njupụta
2. Ike dị elu
3. Ezigbo nguzogide eletriki
4. Ogologo nha nha
Monocrystalline gwakọtara alumina, na-agbaze na okpomọkụ dị elu site na usoro pụrụ iche, bụ ihe na-egweri ihe dị elu. Ngwurugwu abrasive na-acha ọcha.
Atụmatụ na Uru:
1. sodium dị ala, n'okpuru 0.2%
2.High ekweghị ekwe
4.High nnukwu njupụta na elu na-eyi ndị na-eguzogide
5.High-end abrasive ihe onwunwe
6. Obere kristal, ọ dịghị mfe imebi ihe eji arụ ọrụ
Fused Alumina Magnesia Spinel bụ ụdị ọhụrụ nke ihe dị ọcha nke sịntetik na-emepụta ihe nke sitere na alumina na nke dị ọcha dị ọcha na-enwu ọkụ magnesia dị ka isi ihe ndị dị na ọkụ ọkụ ọkụ eletrik mgbe agbazere na okpomọkụ dị elu karịa 2000 ℃ wee mma.
1. Akwa nnukwu njupụta
2. Nguzogide ike nke mbuze
3. Nnukwu mmebi nke corrosion
4. Ezigbo nguzogide slag na nkwụsi ike nke ala
Fused dund corundum bu ihe ohuru nke ihe di ocha di ocha nke emeputara site na iji alumina di ocha ma belata onye na-acho onodu ya, na-agba oku na oku oku. Isi kristal kristal bụ α-Al2O3 na agba bụ isi awọ.
1.High nnukwu njupụta na nnọọ porosity
2.Excellent eyi nguzogide
3.Good slag eguzogide na hign okpomọkụ
4.High olu kwụsie ike
5.Good thermal ujo-eguzogide
White gwakọtara alumina bụ akwa-ọkwa refractory akụrụngwa, mere nke elu-edu ulo oru alumina ntụ ntụ mgbe gbazee na a elu okpomọkụ n'elu 2200 ℃ na electric tilting ọkụ na mgbe mma. Isi mkpuchi ya bụ α-Al2O3, na agba ya na-acha ọcha.
Ọ bụ isi akụrụngwa maka imepụta ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ dị elu na nke enweghị aha, ọ anaghị eji ya arụ ọrụ dịgasị iche iche.
2.Good eyi eguzogide na corrosion eguzogide
3.High ibu okpomọkụ mgbe ị na-emepụta ngwaahịa
4. Mee ka nkwụsi ike olu na ike na-eguzogide ihe nke ihe.